Amazon Queen kubva WMS uchitamba mutambo wacho ndiye Classic 20 payline slots vamwe chaiko inotonhorera zvinhu. Ukapisa murwi remake ndechimwe mumwe wavo. Uye bhonasi Tunoruka vanogona kunyika imi inotyisa 100 vakasununguka Tunoruka. Remake kutoitika panguva vakasununguka Tunoruka yakapoteredza kubatsira iwe kuhwina dzimwe mari guru. saka, kubatana Mambokadzi Amazons munyika slots ichi chinofadza yemhuka kubva WMS kuti mukana kuhwinha dzimwe mari hombe. slots iri kunyanya akaitira vatambi avo kudzinganisa avo Unobata rakakura.
Amazon Queen anobatana nemamwe mitambo iri mazita chaiwo WMS playing slots mitambo kuitwa piwa kune Mobile kuchikuva. Izvi zvinoitwa nokuda mumwe subsidiaries pakati WMS cheap car insurance, Williams Interactive. The Queen pachake anotarira hunoshamisa zviri mhuka uye nevamwe hwakajeka mashoko kuwedzera kunaka mutambo.
Unogona Bet pose pakati 20p kuti £ 60 ose kuruka riri rakafanana chaizvo mitambo slots.
The USP pamusoro Amazon Queen anofanira kuva chokwadi kuti anotamba zvose nzira. i.e kubva rweruboshwe kurudyi uyewo kurutivi rworudyi kusvikira kurutivi rworuboshwe. Uyewo mutambo anozvirumbidza pamusoro ukapisa murwi remake inoratidza kumhara izvo zvinogona kukubatsira kukunda zvikuru mari yakawanda. Chikara ( waterfall chiratidzo) anozviratidza pamusoro vanodzungunyika 2 kana vanodzungunyika 3 kana vanodzungunyika 4 uye unotsiva nedzimwe zviratidzo zvose kunze Amazon Queen chiratidzo kukubatsira kunyika richakunda wemishonga.
The Amazon Queen chiratidzo ndicho Kuparadzira chiratidzo munyika mutambo uyu. Ramba ziso panze nokuti sezvo 3 kana kunyange kupfuura 3 Amazon mambokadzi sezvo zvichaguma vamwe Free Tunoruka zvinoshamisa. Vangani vakasununguka Tunoruka wasvikako kuda zvinoenderana kangani Amazon Queen chiratidzo rinowanika. 3 zviratidzo rowana ichakusunungurai Tunoruka gumi apo 4 rowana iwe 25 uye 5 anoparadzira kunoguma huru 100 vakasununguka Tunoruka bhonasi. The 10 uye 25 Free kuruka bonuses zviri nyore chaizvo kuwana nepo 100 angada zvishoma murefu kubva kurutivi rwako.
The akasununguka Tunoruka pachavo anogona retriggered uye dzinenge mapfumo. Ichi ndechimwe chinhu wakadzikama mutambo uyu.
Uyu ndomumwe rwendo kuenda nomusango imi angasada kurovha!!
Amazon Queen ari Super raparadza mutambo kubva WMS. The Unobata vane hombe uye mutambo pachayo zvinonakidza kutamba. tora 3 magorira pamusoro pedyo Gwenzi uye ungazviona wava kuva sezvo vapfumi sezvo Queen pachake. Patience kunokosha mutambo uyu, kukonzera mukomana mutambo uyu mubayiro kushivirira nenzira isina zvikuru. saka, musapotse uchinzvera iri musango.